မြန်မာ့ပုလဲနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ပြည်ပပုလဲထုတ်လုပ်ရေးကျွန်းစခန်းများ
မြန်မာ့ပုလဲနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ပြည်တွင်းပုလဲထုတ်လုပ်ရေးကျွန်းစခန်းများ
၁။ နိုင်ငံသားကုန်သည်မည်သူမဆို ပြည်တွင်းပုလဲရောင်းချပွဲသို့ တက်ရောက်ဝယ်ယူခွင့်ပြုပါမည်။
၂။ မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့် ပုလဲအတွဲများအားမျက်မြင် အခြေအနေအ တိုင်းနိုင်ငံသားကုန်သည်များကို သာမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ရောင်းချပေးမည်။
၃။ ပုလဲတွဲများအား ဝယ်ယူလိုသူများသည် မိမိ၏နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် ပြသ၍ ရောင်းချပွဲ ဝင်ခွင့်ကတ်ပြားနှင့်ပုလဲကြည့်ရှုခွင့်ကတ်ပြား (၂)ခုကို ရောင်းချပွဲကျင်းပသည့်နေရာ တွင်ထုတ်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ကတ်ပြားများအားထုတ်ပေးရာတွင် ပုလဲကုန်သည်၏ ကတ်ကို အဝါရောင်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကုန်သည်၏ အဖွဲ့ဝင်အတွက်ကတ်ကို အစိမ်းရောင်ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ပုလဲကြည့်ရှုခွင့် ကတ်ကိုပန်းရောင်ဖြင့်လည်း ကောင်း၊ဧည့်သည်ကတ်ကို အဖြူရောင်ဖြင့်လည်း ကောင်းထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ပုလဲ ဝယ်ယူရန် ရောင်းချပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများသည် လက်ဝတ်ရတနာ ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိသောပုလဲအလွတ် (Loose Pearls) များအား ရောင်းချပွဲကျင်းပသည့် ခန်းမအတွင်းသို့ ယူဆောင်လာခွင့်မပြုပါ။ ယူဆောင်လာခြင်းကို တွေ့ရှိပါက နိုင်ငံပိုင်အဖြစ် သိမ်းဆည်း ခြင်းခံရမည်။
၆။ ဖိတ်ကြားခြင်း ခံရသူသည် မိမိအား ထုတ်ပေးထားသော ပုလဲထုတ်ယူကြည့်ရှုခွင့်ကတ်အား အသုံးပြု၍ သက်ဆိုင်ရာကောင်တာမှကြည့်ရှုလို သောပုလဲအတွဲများကို တစ်ကြိမ်လျှင်(၂)တွဲနှုန်း ဖြင့်ထုတ်ယူ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၇။ ပုလဲတွဲများအား ထုတ်ယူရာ၌ သက်ဆိုင်ရာကောင်တာတွင် ထုတ်ယူသောပုလဲတွဲ၏အလေးချိန် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ၊ပုလဲကုန်သည်များကိုယ်တိုင် စစ်ဆေး၍ထုတ်ယူရမည်။
၈။ ကြည့်ရှုပြီး ပုလဲတွဲများကို သက်ဆိုင်ရာ ကောင်တာသို့ အပ်နှံသည့်အခါတွင် ထုတ်ယူစဉ်က အလေးချိန်အတိုင်းကို က်ညီမှုရှိ၊မရှိကို မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ဝန်ထမ်းများမှချိန်တွယ်စစ်ဆေးပြီးလက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၉။ ဌာနဝန်ထမ်းအား ပုလဲထုတ်သွင်းရာတွင် ကူညီရန်ငှားရမ်းပါက အဆိုပါဝန်ထမ်းသည် ပုလဲ ကုန်သည်မှငှားရမ်းသူဖြစ်သဖြင့် မည်သည့်အကြောင်းကိစ္စဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ ပုလဲကုန်သည်တွင် သာတာဝန်ရှိစေရမည်။
၁ဝ။ တင်ဒါပေးသွင်းခြင်းကို ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့်သာ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ကြမ်းခင်းဈေးထက် မနည်းစေရပါ။
၁၁။ ရောင်းချပွဲတက်ရောက်သူသည် မိမိတင်ဒါတင်သွင်းလွှာကို သတ်မှတ်ထားသော တင်ဒါပုံး အတွင်းသို့ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ ထည့်သွင်းရပါမည်။ တင်ဒါတင်သွင်း လွှာကို ရောင်းချရေးအဖွဲ့မှပိတ်သိမ်းကြောင်းမကြေညာမီအထိ ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ရောင်းချ ရေးအဖွဲ့သည်ပုလဲအတွဲတစ်တွဲချင်းအလိုက်ဈေးအများဆုံး ပေးသွင်းသူအား ရောင်းချပေးပါမည်။
၁၂။ တင်ဒါရေးသွင်းပုံစံတွင် ခဲခြစ်အမှတ်အသားဖြင့် သပ်ရပ်စွာခြယ်သပြီး ဖော်ပြသည့်ငွေ ပမာဏကိုသာ (Electronic Card Reader) စက်မှ ဖတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြည့်ထားသည့် ဂဏန်းတန်ဖိုးအား လိုအပ်မှသာ ရောင်းချရေးအဖွဲ့မှ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုပြုမည် ဖြစ် ပါသည်။
၁၃။ တင်ဒါပုံးအတွင်း ထည့်သွင်းပြီး သောပုံစံတွင် မိမိတင်သွင်း သောတန်ဖိုးသည် များနေ၍ ပြင်ဆင် လိုပါက တင်ဒါပုံးဖွင့်ဖောက်မကြေညာမီဈေးနှုန်းပြင်ဆင်သည့် တင်ဒါတင်သွင်းလွှာ (Correction Bid Form) ဖြင့် ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
၁၄။ မိမိ တင်သွင်းသော တန်ဖိုးမှာ နည်းနေပါက တင်ဒါပုံစံအသစ်တွင် တိုးမြှင့်ပေးလိုသောတန်ဖိုး အားရေးသွင်း၍ ထပ်မံတင်သွင်းနိုင်သည်။ အများဆုံး တန်ဖိုးကိုသာအတည်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၅။ အကယ်၍ တင်ဒါပေးသူနှစ်ဦး (သို့) နှစ်ဦးထက်ပိုသူများမှ ပေးသွင်းသည့်တန်ဖိုးသည် တူညီနေပါကမူလပေးသွင်း တန်ဖိုးထက် ပိုမိုသည့်တန်ဖိုးဖြင့် တင်ဒါတစ်စောင်စီ ထပ်မံပေးသွင်း စေပြီးထပ်မံတူညီနေပါက တင်ဒါပြီးပြတ်သည်အထိ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
၁၆။ တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ကြေညာပြီး ချိန်တွင်ကြေညာသည့်စာရင်း၌ မိမိပေးသွင်းသော အတွဲအမှတ်၊ ပွဲတက်ခွင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၊ ပေးသွင်းသည့်ငွေပမာဏတို့ ကွဲလွဲမှုရှိနေပါက ပြည်တွင်း ပုလဲရောင်းချရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ ချက်ချင်းတင်ပြ၍ တင်ဒါအဖြေမှန် ရရှိရေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၇။ ပြည်တွင်း ပုလဲရောင်းချရေး လုပ်ငန်းကော်မတီသည် တင်ဒါအောင်သူ အမည်စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း မပြုမီအချိန်အထိ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ မည်သည့် ပုလဲအတွဲရောင်းချခြင်းကိုမဆိုပယ်ဖျက်ခွင့်ရှိသည်။
၁၈။ ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာများထည့်သွင်းရန်တင်ဒါပုံး ( Tender Box ) များကိုထည့်သွင်းနိုင်ရန် ထားရှိပေးပါမည်။
၁၉။ ( Tender Box ) များကို နေ့စဉ်သော့ခတ်ချိတ်ထိုး၍ Vault Room တွင်သိမ်းဆည်းထားပါ မည်။
၁။ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ရောင်းချပါမည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖြင့် ဝယ်ယူရရှိခဲ့သည့်ပုလဲအတွဲများကို အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ( Sale Agreement ) များတွင် မပျက်မကွက် လက်မှတ်ရေးထိုး စာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်။ အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုခဲ့ပါက ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူက အရောင်းအဝယ် စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသကဲ့သို့ သတ်မှတ်မည်။
၃။ တင်ဒါအောင်မြင်သူပုလဲကုန်သည်များအား ငွေသွင်းရန်ချလံပုံစံများကို မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ် ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ထုတ်ပေးမည်။ ပေးသွင်းရမည့်ကျသင့်ငွေအား မြန်မာ့စီးပွား ရေးဘဏ်(နေပြည်တော်)သို့မဟုတ် ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်၊ဘဏ်ခွဲ(၃)မှတစ်ဆင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(နေပြည်တော်)သို့ ပေးသွင်းရမည်။
၄။ ဘဏ်မှငွေသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားချလံဖြင့် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ် ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)တွင် ပုလဲထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၅။ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါအောင်မြင်သူ ပုလဲကုန်သည်များသည် ငွေပေးချေရန် စတင်သတ်မှတ် သည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၉ဝ)အတွင်း ပစ္စည်းတန်ဖိုး အပြည့်အဝပေးသွင်း၍ ပုလဲများကို ထုတ်ယူရမည်။ ငွေအကြေပေးချေခြင်းမပြုပါက အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ဖျက်သိမ်းသည် ဟုသတ်မှတ်ပြီး ပြည်တွင်းပုလဲရောင်းချပွဲတက်ရောက်ခွင့်(၃)ကြိမ် ပိတ်ပင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူအနေဖြင့် မိမိတို့ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသည့် အတွဲများအတွက် အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ငွေပေးချေရပါမည်။
၁။ တင်ဒါဖြည့်စွက်ရေးသွင်းမည့်ပုံစံမှာ Electronic Card Reader စက်ဖြင့်ဖတ်၍ တင်ဒါ ဖွင့်ဖောက်ကြေညာမည်ဖြစ်ပါ၍ ပုံစံစာရွက်အားစွန်းထင်းခြင်း၊ ချိုးခေါက်ခြင်း များမပြု လုပ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
၂။ သတ်မှတ်ပေးထားသော 6B ခဲတံဖြင့် ပုံစံတွင်အမှတ်အသားရေးခြယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၃။ အမှတ်အသားအားဖျက်၍ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုပါကသတ်မှတ်ပေးထားသော Plastic ခဲဖျက်အား သုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။
၄။ ကော်လံ အကွက်များအတွင်း ဂဏန်းများအား အမှတ်အသား ရေးခြယ်သည့်အခါမှန်ကန်မှုရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
၅။ အမှတ်အသားရေးခြယ်မှုအား ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာသင်၏ ပွဲတက်ခွင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Registration Number) ၊ တင်ဒါပေးသွင်းမည့် အတွဲအမှတ် (Lot Number) နှင့် တင်ဒါပေးသွင်းမည့်ငွေပမာဏ (Offered Price) တို့အား ပုံစံအတွင်းရှိ ထိပ်ဆုံးတွင်ပါရှိသောသီးသန့် အကွက်များအတွင်း ဂဏန်းဖြင့်ရေးသွင်းရမည်။
၆။ ကွန်ပျူတာမှာ ပုံစံ၏ အောက်ဘက်တွင်ရှိ ကော်လံများအတွင်း ခဲခြစ်ဖော်ပြထားသော အမှတ်အသားကို သာဖတ်၍ သင်၏တင်ဒါရေးသွင်းမှုအား ဖော်ပြမည်ကို သတိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
အဆင့်(၁)သင်၏ပွဲတက်ခွင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Registration Number) အားစစ်ဆေး၍ ရေးသွင်းပါ။ ပွဲတက်ခွင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ်(Registration Number)အား ပုံစံရှိဖော်ပြပါရှိသော ဂဏန်းကွက် (၃)ကွက်တွင် အပြည့်ဖြည့်စွက်ရန်၊ ဥပမာ- No.(1) အား(ဝဝ၁) ဟု လည်းကောင်း၊ No.(12)tm; အား (ဝ၁၂)ဟုလည်းကောင်းရေးသွင်းရန်ဖြစ်သည်။
အဆင့်(၂) အတွဲအမှတ် (Lot No) အားပုံစံရှိဖော်ပြပါရှိသောဂဏန်းကွက်(၃)ကွက်တွင် အပြည့် ဖြည့်စွက်ရန်၊ ဥပမာ-အတွဲအမှတ်(၂)အား(ဝဝ၂)ဟုလည်းကောင်း၊ Registration No.(3) အား(ဝဝ၃)ဟုလည်းကောင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။
အဆင့်(၃) သင်ပေးသွင်းလိုသော ကျပ်ငွေပမာဏအားကော်လံ(၈)ကွက်တွင် အပြည့်ဖြည့် စွက်ခဲခြစ် မှတ်သားရန်၊ ဥပမာ-၁,၇၅ဝ,ဝဝဝ ကျပ်အား ဝ၁,၇၅ဝ,ဝဝဝ ဟုလည်းကောင်း၊ကျပ် ၈ဝဝ,ဝဝဝ အား ဝဝ,၈ဝဝ,ဝဝဝ ဟုလည်းကောင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။
အဆင့်(၄) တင်ဒါပုံစံတွင် သင်၏လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
မှတ်ချက်။ ပေးသွင်းပြီး တင်ဒါပုံစံတွင်သင်ပေးသွင်းထားသော ကျပ်ငွေပမာဏအား ထပ်မံတိုးမြှင့်လိုပါကပုံစံအသစ်တစ်ရွက်တွင်ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်၍ပေးသွင်းခွင့်ရှိသည်။
Myanma Gems Museum, Yazathingha Street, Zabuthri Township, Naypyitaw, Myanmar
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar. Copyright © 2015 myanmarpearl.com. All rights reserved.